SMPTE®မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE® 2014 ဒါရိုက်တာချိန်းကြေညာ
SMPTE® 2014 ဒါရိုက်တာချိန်းကြေညာ
နယူးခန့်အပ်ရန်အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာ၏အနက်ကိုယူခဲ့ SMPTE'' s 'ကိုတိုင်သုံးတိုင်': စံချိန်စံညွှန်း, အသင်းဝင်များနှင့်ပညာရေး
White Plains, နယူးယော့â€ "€âဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2014" အဆိုပါ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က® (SMPTE®), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ယနေ့ 2014 ထုတ်ပြန်ကြေညာ SMPTE ဒါရိုက်တာများ။ အလန် Lambshead, SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစံချိန်စံညွှန်းများဒါရိုက်တာများအဖြစ်အစေခံရန်ဘော့ Edge, အိုလီဗာမော်ဂန်နှင့် Howard Lukk ခနျ့အပျထား, ရှင်ပေါလု Stechly, SMPTE အဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများအဖြစ်အစေခံရန်ဘရုစ် Devlin, ကားလ် Kuhn, နဲ့ William C. Miller ကခန့်အပ်ထားသော; နှင့်ပက်ထရစ် Griffis, SMPTE ပညာရေးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ပညာရေးဒါရိုက်တာအဖြစ်အစေခံရန်မိုက်ကယ်တန်ဖိုး, V. မိုက်ကယ် Bove, ပေတရု Putman နှင့်အယ်လ် Kovalick ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
"တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, SMPTE 2014 ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကြသူအဖွဲ့ဝင်များကခြွင်းချက်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုခေါင်းဆောင်မှုရန်, လမ်းညွှန်မှု, နှင့် Society ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုငါဆောင်ခဲ့မည် "Wendy Aylsworth ဆိုသည်ကား, SMPTE သမ္မတနှင့် Warner Bros. နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးမှာနည်းပညာ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ "ဟုအဆိုပါအဝင်ဒါရိုက်တာများသည်တဦးတည်းပြီးသားအဆိုကို-ပုံရိပ် field ရဲ့တိုးရန်, ဒါပေမယ့်လည်း၏အလုံးစုံအောင်မြင်မှုမသာသိသာပံ့ပိုးမှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ SMPTE။ လာမယ့်တစ်နှစ်ကျော်စီ€ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစံချိန်စံညွှန်းများအတွက်အလုပ်, အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်ပညာရေးâအတွက်တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည် "ဟုအဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ထားသောပေါ်တွင်တိုင်သုံးတိုင်။ "
ဘော့ edge တီဗီအတိုင်ပင်ခံဥက္ကဋ္ဌသူသည်အစွန်း, ရုပ်မြင်သံကြားစံချိန်စံညွှန်းအတွက်တက်ကြွခဲ့ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU), ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF), အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA) နဲ့စီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်ထက်ပို 18 နှစ်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ထားပါတယ် , SMPTEနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ။ သူကတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် SMPTE အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်နည်းပညာကော်မတီကကုလားထိုင်သကဲ့သို့, အဆိုပါ Society မှာနေတဲ့ဘဝက Fellow ဖြစ်၏ ကျော်တစ်ဒါဇင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ် SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အမှတ်ပုံတင်ထုတ်ဖော်စာရွက်စာတမ်းများ (RDD) ။ edge လည်းရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် networking မြောက်မြားစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ၏လျှောက်လွှာကိုဖော်ပြစာတမ်းများ (အိုင်တီ) နှင့်အချက်အလက်များ၏စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဂန် Metaglue Corporation ၏တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သည်။ 30 နှစ်ပေါင်းထက်ပို spanning, ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, Convergence Corporation မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍများပါဝင်သည် Sony က ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ။ သူက SMPTE သူချင်းများနှင့်, အများ၏ကုလားထိုင်အဖြစ် SMPTE 25 မှတဆင့် 2000 ထံမှ Metadata နှင့် wrapper နည်းပညာအပေါ် W2004 ကော်မတီ, အများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပဲ့ထိန်းထားပါတယ် SMPTE metadata အဘိနှင့်ပစ္စည်းလဲလှယ်ရေးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ (MXF) ။ သူ 10 မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူနှင့် AMWA တစ်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
Lukk သူစတူဒီယို၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့အသစ်သောနည်းပညာများကိုထည့်သွင်းဖို့ကူညီမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ရှိရာအဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးစတူဒီယိုမှာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။ သူက SMPTE သူချင်းများနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏ American Society (ASC) တွင်တစ်ဦးတွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်။
Devlin မီဒီယာအားလုံးရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ 25 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ထားပါတယ်များနှင့်ယနေ့ AmberFin နည်းပညာအရာရှိချုပ် (CTO) အဖြစ်သူကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာမဟာဗျူဟာစေပါတယ်။ သူက (အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူများပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်IABM), တစ်ဦး SMPTE သူချင်းများနှင့်တစ်ဦးလက်ခံရရှိသူ SMPTE'' s ကိုဒါဝိဒ်သည် Sarnoff တံဆိပ်နှင့်ဗြိတိသျှ Kinematograph, အသံများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ (BKSTS) 'အောင်မြင်မှုကိုချီးမြှင့်။ Devlin မူပိုင်ခွင့်, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ရှေ့ဆက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းထုတ်ကြောင်းစာအုပ်များရေးသားထားသည်။
Kuhn Tektronix သူဒီဂျစ်တယ်အသံနှင့်ဗီဒီယို, compression, အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP), ဖိုင်-based နှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှာအကြီးတန်းကဗီဒီယိုစနစ်များ applications များအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒီဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယို၏ In-service ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုဖုံးလွှမ်းသုံးအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်တဦးတည်းဂျပန်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ Kuhn ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) နည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာသူဟာ Emmy အမျိုးသားအကယ်ဒမီအပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်® 2007 ထံမှ 2010 မှကော်မတီ, သူသည်ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏အတိတ်ကုလားထိုင်ဖြစ်ပါသည်, SMPTE အပိုင်း; သူသည်ယခုအခါအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် SMPTE အရှေ့ပိုင်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူး။
Miller က Miltag မီဒီယာနည်းပညာ LLC, ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးပြုတစ်အတိုင်ပင်ခံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ သူ XV အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ ABC ရုပ်သံရဲ့လွှမ်းခြုံရန်သူ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအနေနဲ့သူဟာ Emmy ဆုချီးမြှင့်ဝင်ငွေနီးပါး 40 နှစ်ပေါင်းတစ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်နှင့် 25 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပြီးအဘို့အရုပ်မြင်သံကြားစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ Miller ကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် SMPTE သူချင်းတစ်ဦး SMPTE နယူးယောက်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် 2002 အတွက် 2013 နှင့်၎င်း၏သမ္မတကြေညာထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးတက်မှုတံဆိပ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသာအတွင်းမြောက်မြားစွာခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကျင်းပခဲ့ပါသည် SMPTEဒါပေမယ့်လည်းလျှပ်စစ်၏ Institute နှငျ့အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ (ကို IEEE) အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) နှင့်အဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ (ATSC) အတွင်း။
တန်ဖိုးသူစံချိန်စံညွှန်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော 3D, 4K အဖြစ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာသစ်များသုတေသနနှင့်မြင့်မားသော dynamic range ကို (HDR) ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာအဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးစတူဒီယိုမှာအဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူများအတွက်အိမ်ရှိ 3D နှင့်ဆက်စပ်သော Co-သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်အများအပြားအုပ်စုများရှိပါတယ် SMPTE နှင့်မှာ stereoscopic 3D အတွက်စာတန်းများတစ် session ကိုတင်ပြ SMPTE 2010 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ။ ဖြည့်စွက်ကာ SMPTEသူက Blu-ray Disc အသင်း (BDA) နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ Initiatives, (DCI) တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူဖြစ်ပြီးကိုလည်းနိုင်ငံတကာ 3D & အဆင့်မြင့် Imaging Society ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။
Bove အားလုံးသူမီဒီယာဓာတ်ခွဲခန်းမှာ Object ကို-အခြေပြု Media Group ၏ဦးခေါင်းသည်အဘယ်မှာရှိနည်းပညာ၏မက်ဆာချူးဆက် (MIT) မှတစ်ဦး SBEE, အမြင်အာရုံလေ့လာမှုများအတွက် SM, နှင့်မီဒီယာနည်းပညာအတွက်ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သူကစာရေးဆရာသို့မဟုတ် 90 ဂျာနယ်နှင့်ကွန်ဖရစာတမ်းများထက်ပိုမိုပူးတွဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်၏ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ခက်မိတ္တူ, အပြန်အလှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆေးဝါးပုံရိပ်နှင့်စပ်လျဉ်းတီထွင်မှုအပေါ်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ; နှင့်စာအုပ်၏ Co-စာရေးဆရာက "Holographic Imaging က။ " သူ၏အယ်ဒီတာများ၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ်; ဂျာနယ်တွင် Optical အင်ဂျင်နီယာ (oe) ၏တွဲဖက်အယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မူပြီ နှင့် SPIE နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, တီထွင်ဖန်တီးနှင့် Capital ကိုများအတွက်အင်စတီကျု၏သူချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Putman, Roaming အတိုင်ပင်ခံ LLC ၏ဥက္ကဋ္ဌ, ထုတ်လုပ်သူများ, ကုန်သည်တွေနှင့် display တွေ, display ကို interfaces နှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုထုတ်ကုန်များ၏အဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်သင်တန်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူ၏အယ်ဒီတာနှင့်ထုတ်ဝေသူ, အသံများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်းများအတွက်ပံ့ပိုးအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည် HDTVexpert.comသူသည်တစ်နှစ်တာ၏ 2008 ICIA ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှရှိရာနိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း (ICIA), အဘို့နှင့်တစ်ဦး InfoComm အကြီးတန်းအကယ်ဒမီနည်းပြ။ သူကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် SMPTE နှင့်သတင်းအချက်အလက် Display ကို (SID) အတွက် Society က, သူသည် ICIA နှင့် Imaging ကသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း (ISF) မှအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရရှိထားပါသည်။
Kovalick, မီဒီယာစနစ်များ Consulting ကိုတည်ထောင်သူ, အတိတ် 20 နှစ်ပေါင်းစပ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်နှင့် IT စနစ်များ၏လယ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်, သူသည်လက်ရှိတွင်မီဒီယာအဆောက်အဦများအတွက်မီဒီယာစနစ်များ, ဖိုင်-based Workflows, မိုဃ်းတိမ်ရွှေ့ပြောင်းအာရုံစိုက်။ သူကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းညီလာခံမှာ 50 စာတမ်းများထက်ပိုမိုတင်ဆက်ထားပါတယ်, သူသည် 18 အမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ 2009 Kovalick ခုနှစ်တွင်ကနေဒါဝိဒ်သည် Sarnoff တံဆိပ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် SMPTE အင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်မှုသည်။ သူ Tau Beta ကို Pi တစ်ခုဘဝအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို IEEE အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် SMPTE ဘဝ Fellow ။ သူကတီဗီနည်းပညာမဂ္ဂဇင်းများအတွက် "Cloudspotter ရဲ့ဂျာနယ်" ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE မှာရရှိနိုင်အွန်လိုင်းဖြစ်ပါသည် www.smpte.org.
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း® (SMPTE®)
အော်စကာ® နှင့်သူဟာ Emmy® Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ဆုရ Society က® (SMPTE®), တဲ့ professional အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသင်းအဖွဲ့, ဆက်သွယ်ရေး, နည်းပညာ, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထောက်ပံ့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်း SMPTE ပညာရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါမြန်နှုန်းကိုဖြတ်ပြီး, ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်ရုံ, နှင့် IT စည်းကမ်းများကို-ပုံရိပ်ရွေ့လျားတိုးတက်မှု။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE အဆိုပါထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ် နှင့် 650 စံချိန်စံညွှန်းများ, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များထက်ပိုမိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူကို "€âရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ" €â 6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုပြီး, ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရေရှည်တည်တံ့။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် www.smpte.org/join.
2014 NAB ပြရန် ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ပညာရေး ဖျော်ဖြေရေး မီဒီယာ Metaglue ကော်ပိုရေးရှင်း ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများ SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများ 2014-02-27
ယခင်: AMV ရဲ့ Westar ဂြိုဟ်တုန်ဆောင်မှုများအဘို့ Miranda ရဲ့ iTX အင်အားကြီးနိုင်ငံများပလေးအောက်
နောက်တစ်ခု: Boxx ရှည်လျားသောအကွာအဝေး Zenith, လျှော့ချနှောင့်နှေး, built-in TalkBack, တာလီချိုးနဲ့မျက်ဝန်း